Akatungamirira hedhiraiti girobhu racho
canbus akatungamirira chiedza
SMD akatungamirira girobhu racho
Cree akatungamirira chiedza
Akaviga xenon kutsigisa igwa
chakavanda kutendeuka Kit
Tine zvakasiyana chigadzirwa (mukuru-magumo chigadzirwa, mid-kuguma chigadzirwa uye mutengo-vakarongeka chigadzirwa) kuti musika zvakasiyana, tapota taura nesu kana uchifarira chigadzirwa.
Hongu, isu zvinoda zvose dzomunyika akarayira kuti kuramba Odha uwandu.
Hongu, tine simba dzichiri chikwata. Zvigadzirwa nokuarongedza zvinogona kuitwa maererano kwenyu chikumbiro, uyewo unogona Laser Logo yako zvigadzirwa.
Kazhinji, tine zvimwe zvinhu aripo, pakukurukura nguva (kwete kusanganisira mazororo) kazhinji 2-3 kushanda mazuva kubudikidza dhl / Ups / TNT / EMS. Kana kuti kwako kunopfuura 100 rinovira, zvinotora mazuva 7-10 kugadzirira, kana murayiro Qty hwunopfuura 1,000 rinovira, zvinotora mazuva 10-15 kupedza kugadzirwa, nokuti zvakawanda Qty, pls tarisa kuti munoreva pamwe rokutengesa dzedu
Isu garandi chigadzirwa edu ose. kuzvipira kwedu kuna kwako kugutsikana pamwe zvinhu zvedu. Kana paine dambudziko quality, tapota titumirei mifananidzo kana mavhidhiyo, ipapo tichakupai kuongorora chikonzero uye kudzivisa nyaya iyi ramangwana, uyewo achaita yokutsiva mutsva kwamuri rako inotevera kuti.
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha.
Ipai Us A Shout
Address: Dehuigangwang Industrial Park, Wanggang Gongye 3rd Rd, Baiyun dunhu, Guangzhou
© Copyright - 2010-2018: EKLIGHT Rights zvose Reserved.
EKLIGHT ndiye mugadziri rwenyanzvi kuti akatungamirira hedhiraiti girobhu racho, akaviga xenon Kit, motokari akatungamirira, masikati achimhanya chiedza, akatungamirira zvechinguvana.